E-News Nepali || Fast and Accuracy » श्रीस्वस्थानी कथावाचनको शुरुवात कहिलेदेखि भयो ? पढेर लाइक र सेयर गरि पुण्य प्राप्त गर्नुहोस !
श्रीस्वस्थानी कथावाचनको शुरुवात कहिलेदेखि भयो ? पढेर लाइक र सेयर गरि पुण्य प्राप्त गर्नुहोस !
अहिले श्री स्वस्थानीको व्रतकथा चलिरहेको छ । हरेक दिन एक–एक अध्याय घर–घरमा वाचन गरिँदै आएको पाइन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरुले पतिको दिर्घायूको कामना र अविवाहित महिलाले सुयोग्य बरको कामना गर्दै श्री स्वस्थानीको व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौंको शालीनदीमा बसेर व्रत लिनेहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा छन् । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्वस्थानी व्रतकथा निकै प्रचलित रहेको देखिन्छ। नेपाली महिलाबीच प्रचलित स्वस्थानीका कतिपय प्रसङ्गबारे पछिल्ला वर्षहरूमा आलोचना पनि हुने गरेको छ।
काठमाण्डू केन्द्रित कथा कतिपय अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वस्थानीको कथालाई काठमाडौंको कथा भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तर यो काठमाडौंकै भने होइन काठमाण्डू केन्द्रित कथा भने हो। शुरुमा यो कथा संस्कृतमा लेखिएको फेला परेको छ। संस्कृतमा लेखिएको केही वर्षपछि त्यसलाई नेपाल भाषा ९नेवारी०मा उल्था गरिएको पाइन्छ। त्यसको धेरै पछि मात्र त्यसलाई नेपालीमा उल्था गरिएको हो।
शुरुको कथा शुरुमा संस्कृतमा लेखिएको स्वस्थानीमा व्रतकथामा त्यसलाई लिङ्ग पुराणको कथा भनिएको छ। त्यसपछि कसैले शिव पुराण त कसैले स्कन्ध पुराण भनेर लेखेको देखिन्छ। तर शुरुमा अहिलेको जस्तो ३२ अध्यायको स्वस्थानी व्रतकथा थिएन।
प्रकाशित मिति १३ माघ २०७६, सोमबार १४:२४